MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has accorded Agrément to the proposed appointment of Dr. Khalid Hussain Memon as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic Republic of Pakistan to the Republic of the Union of Myanmar
Myanmar has accorded Agrément to the proposed appointment of Dr. Khalid Hussain Memon as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic Republic of Pakistan to the Republic of the Union of Myanmar
by adminmofa on 06/03/2017 at 6:41 PM
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has accorded Agrément to the proposed appointment of Dr. Khalid Hussain Memon as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic Republic of Pakistan to the Republic of the Union of Myanmar.
Dr. Khalid Hussain Memon was born in 1964. He holds degrees of MBBS, B.A and LLB. He joined Foreign Service of Pakistan in 1988. He served at the Headquarters as Section Officer in OIC and Africa Directorates, Director in Finance and Afghanistan Division and Director-General in Finance Division and Headquarters. He was assigned in the Islamic Republic of Pakistan Missions in Oslo (2007-2009) and Cairo (2010-2011). He is currently serving as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic Republic of Pakistan to the Republic of Poland since December 2013. He is married.
Dated: 6th March 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ဒေါက်တာခါလစ် ဟူစိန် မန်မွန် အား ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြု ချက်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာခါလစ် ဟူစိန် မန်မွန်ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ဆေးပညာဘွဲ့၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့နှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာဘွဲ့များ ရရှိထားသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၌ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ဝန်ကြီးဌာနတွင် အစ္စလာမစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့နှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများဆိုင်ရာဌာနတွင် အရာထမ်းအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတို့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး ဌာနနှင့် ဌာနချုပ်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း ရာထူးအဆင့်ဆင်‌့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ အော်စလိုမြို့ရှိ ပါကစ္စတန် သံရုံး၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ကိုင်ရိုမြို့ရှိ ပါကစ္စတန်သံရုံး၌ လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ ပိုလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပါကစ္စတန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်။